प्रत्येक महिला उनको परिवारको लागि जिम्मेवार छ। कि यो वातावरण र राम्रो-जा असर गर्छ। आखिर, एक महिला छोराछोरीको हेरविचार घर सफा राख्न र उनको पति ध्यान आवश्यक छ। सबै जस्तै समय मा र अझै पनि दयालु कोमल र नरम हुन? यो आदर्श पत्नी यसलाई देखिन्छ ताकि सजिलो छैन बन्न कि बाहिर जान्छ। यस लेखमा उनको पतिको पत्नी बरामद के जिम्मेवारी छलफल गरिनेछ।
वैवाहिक ऋण के हो?
धेरै दम्पतीले यो मामला मा एक यौन सम्बन्ध बुझाउँछ भन्ने विश्वास गर्छन्। तथापि, मनोवैज्ञानिक अन्यथा दाबी गर्छन्। वैवाहिक कर्तव्य - एक नैतिक सम्बन्ध, यस्तो वफादारी इमानदारी, कर्तव्य दोस्रो आधा, अन्तस्करणले पहिले जस्तो। एक विवाह प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्ति, आफ्नो काँध परिवार को लागि भारी जिम्मेवारी राख्नु त्यस सम्झना गर्न बाध्य हुनेछन्।
विवाहको नैतिकता - सबै अरू माथि। आखिर, सेक्स सधैं समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दैन। त्यसैले, धेरै जोडे आफ्नो साझेदार समर्थन, हेरविचार र मित्रतालाई मूल्यांकन गर्छौं।
परिवारमा, धेरै पत्नी निर्भर गर्दछ। यसलाई सुरुमा जिम्मेवारी प्रदान रूपमा, त्यसैले भविष्यमा र spouses जीवन कोर्न हुनेछ। यसलाई हेरचाह गर्न आफ्नो अन्य आधा राख्न - र तपाईंले बलियो, नजिक-बुनना परिवार हुनेछ।
आधारभूत महिला घरेलू कर्तव्य
प्रत्येक दम्पती सँगै जीवन निर्माण गर्छ। नियम, मानिस - को breadwinner र महिला - चूल्हा को keeper। त्यसैले कि मनपर्ने काम पछि घर जान चाहनुहुन्छ यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ। घरमा यो गर्न हटाइएको र एक राम्रो आरामदायक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
पत्नी को घर को कर्तव्य धेरै चुनौतीहरूको आउँछ। तिनीहरूलाई को - यो पकाउने छ। पतिको को आगमन खाने खाना पकाउन अघि पत्नी अग्रिम गर्नुपर्छ। यो रोमान्टिक वातावरण सिर्जना गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। यस्तो अवस्थामा पति खुसी आउन हुनेछ।
खानाको पछि फोहोर भाँडा छोड्न छैन: प्रयास गर्नुहोस्। यो खराब फारम मानिन्छ। सायद आफ्नो मनपर्ने तपाईं टिप्पणी गर्न, तर यो भान्सा सुकाएकोमाटो मनन गर्न अप्रिय हुनेछ।
एक मुस्कान संग प्रिय पूरा गर्न आवश्यक। वास्तवमा, एक कठिन दिन पछि तिमी आराम र सकारात्मक भावना प्राप्त गर्न चाहन्छु। अक्सर सकेसम्म जहाँ त्यहाँ मोमबत्ती र प्रकाश आराम संगीत हो रोमान्टिक साँझ व्यवस्था।
मेरो श्रीमान् बिहान काम गर्न लाग्नुभएको थियो, त्यो सफा stroked कुराहरू लगाउने गर्नुपर्छ। त्यो एक पत्नी एक प्रेम एक हेरचाह गर्न बाध्य छ। पति बिहान चलाउन गर्नुभएको छैन र देख थिएन आवश्यक कुराहरू उहाँले धारण अघि रात तयार।
पारिवारिक जिम्मेवारी पत्नी सीमित छैन। वास्तवमा, तिनीहरू धेरै। थप पढ्नुहोस्।
सौन्दर्य र सौंदर्य
पतिको काम गर्न लागि प्रतीक्षा गर्दै छन्, हामी खाने तयार, घर सफा र सहज छ, तपाईं आफैलाई बारेमा सम्झना गर्न आवश्यक छ। आफ्नो थकान भए तापनि आफ्नो पत्नी सधैं सफा र चिटिक्क खोज्नुपर्छ। राम्रो पति यो मात्र होइन एक आरामदायक घर, तर पनि सुन्दर पत्नी हेर्न आउँदा।
मेरो कपाल गर्छन, एक प्रेम एक को आगमन परिवर्तन गर्न, लागू प्रकाश बनाउन-अप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। साँच्चै, धेरै महिला अन्ततः आफूलाई बारेमा बिर्सन्छन्। तिनीहरूले घरेलू घरधन्दा लागि एक पटक क्रममा आफूलाई राख्न तर्क, तर यो पनि आफ्नो उपस्थिति पाँच मात्र मिनेट दिइएको सकिन्छ! हेरविचार पनि एक पत्नी को वैवाहिक कर्तव्य समावेश गरिएको छ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कुनै पनि व्यक्ति एक असल र विश्वसनीय मित्र छ। तसर्थ, पत्नी मात्र उत्कृष्ट प्रेमीहरूको, तर वफादार मित्र हुनुपर्छ। मानिस उहाँले पूर्णतया आफ्नो प्रिय भरोसा गर्न सक्छौं भनेर थाह धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, कुनै कुरा के हुन्छ, पत्नी सधैं पतिको समर्थन गर्नुपर्छ र आफ्नो पक्षमा हुन।
एक महिला आफ्नो प्रिय प्रेरित गर्नुपर्छ। उहाँले ठीक काम सम्बन्ध सफल गर्नुभएन भने, तपाईं यसलाई निन्दाले मा आवश्यक छैन। सायद त्यो अझै आफ्नो ठाउँमा फेला गरेको छैन। पतिको आफूलाई फेला पार्न मद्दत गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आखिर, समर्थन गर्न एक मानिस, कुनै पनि मानिस जस्तै, तर धन्यवाद राम्रो लागि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछ।
आफ्नो प्रेम एक सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। पत्नी - पति सफल व्यक्ति हुन्छ जो जग हो। गुनासो छैन, उहाँले केही काम गर्दैन छ जब एक जोडीलाई द्वारा आहत हुन छैन। यो सम्बन्ध बाट झन् खराब हुन्छ। आखिर, आफ्नो निराशा त्यसपछि उहाँले पिन्चे र असुरक्षित हुन्छ, पतिको हस्तान्तरण गरिएको छ। विवाहमा पत्नी को कर्तव्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, यो परिवारको भविष्य निर्भर गर्दछ।
जस्तै पुरुष एक महिला उहाँले admires गर्दा। आफ्नो क्षमता, प्रतिभा र साहस बारेमा कुरा गर्न धेरै सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस्। मजबूत सेक्स गर्न यो मनपर्ने हेर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले प्रशंसा छ देख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो उपलब्धिहरू सबै आशा भन्दा बढी हुनेछ।
पति को अधिकार - विवाह एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड
परिवारको टाउको - भएदेखि पुरातन समयका मानिस माथि ल्याए। मनपर्ने विश्वास, तपाईं मोल भनी साबित र आफ्नो राय आदर। तिमी मेरो पति आमा र प्रिय छैनन् किनभने, आफ्नो जीवन सिकाउन छैन। सम्झना: परिवार प्रतिष्ठा लागि एक मानिस हुनुपर्छ।
आफ्नो मनपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा, उसलाई समर्थन। तपाईं उसलाई विश्वास छ कि, व्याख्या गर्नुहोस्। मुख्य मानिस - सबै पछि, त्यो परिवार छ। तपाईं बच्चाहरु छन् भने, त्यसपछि तिनीहरूले पोपको भनेर थाहा हुनुपर्छ - अख्तियार, यो आज्ञा पालन र आदर गर्नुपर्छ।
मानिस - एक नेता, रक्षक र उपकारक। यो स्थिति आफ्नो प्रेम एक परित्याग र sniknut दिन छैन। उहाँले सधैँ आफ्नो पत्नी र छोराछोरीलाई अर्थात्, तपाईंको परिवारका आवश्यकता छ भनेर थाहा हुनेछ।
एक जोडीलाई आमाबाबु, छोराछोरी र मित्र को आँखा मा पतिको अख्तियार बढ्छ भने, स्वतः एक सफल व्यक्ति हुनेछ। आफ्नो पति उसलाई तपाईं देख भनेर जब उहाँले तपाईंलाई असफल हुनेछ भनेर सम्भव छैन सबै गर्नेछ। उहाँले पैसा कमाउन पेसा निर्माण हुनेछ, र आफ्नो प्रिय बच्चाहरु र पत्नी ध्यान। पतिको अख्तियार जुटाउने - पनि परिवार मा एक पत्नी को कर्तव्य हो।
भक्ति - महत्त्वपूर्ण छ र सधैं विवाहको मापदण्ड हासिल छैन। निष्ठा प्रेम र मानव आदर बारेमा भन्छन्। पत्नी आफु उनको अनुपस्थितिमा उनको पति परिवर्तन गर्न अनुमति भने, विवाह को बल गम्भीर कुरा। भक्ति - प्रिय लागि पहिलो र मुख्य आदर छ।
तर, संसारमा आज खुला सम्बन्ध मा। जोडी यस बारे अग्रिम सहमत हुनुहुन्छ। अनुभव यस्तो विवाह चाँडै बिग्रनु कि देखाइएको छ। ढिलो होस् वा चाँडो, जोडी को एक आफ्नो आधा विपरीत सेक्स को डाह सुरु हुन्छ।
हेरविचार पतिको अपिल, उच्च-तरिकाहरू लिन चाहेको गर्न Aspire गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्ति मात्र धेरै आवश्यक यसलाई चाहनुहुन्छ दोस्रो आधा वफादार हुन सक्छ। तपाईं सुरक्षित र आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने, छेउमा साहसिक खोज्न छैन।
पत्नी वफादार रहन पत्नी, मात्र आवश्यक ठूलो मित्र, तर पनि सेक्सी छन्। जीवनको घनिष्ठ पक्षहरू बाट धेरै spouses को निष्ठा सहित निर्भर गर्दछ। मिति, त्यहाँ सेक्स को एक किसिम को लागि धेरै तरिकाहरू छन्। रचनात्मक कल्पना र जीवन मा embody। तपाईं देख्नु सही कसरी राम्रो लागि आफ्नो सम्बन्ध परिवर्तन गर्न टाढा।
पत्नी र छोराछोरीलाई
आमा काम धेरै गाह्रो छ। यसलाई अन्यथा कसरी हुन सक्छ! निस्सन्देह, पत्नी पनि छोराछोरी जन्माउन बाध्य हुनुपर्छ। पति कठिन काम गर्दछ भने, त्यसपछि बच्चाहरु शिक्षा भन्दा महिला को काँध मा खण्डमा। यो धैर्य, ध्यान र समझ धेरै आवश्यक हार्ड काम हो।
पत्नी, छोराछोरी संग कोमल दयालु र कोमल हुनुपर्छ। बच्चाहरु मेरो आमा प्रेम गर्नुपर्छ, र डराउनु छैन। पति बच्चाहरु तिर पत्नी मनोवृत्ति देख्दा, त्यो थप मोल। तर आमा आफ्नो खाली समय मा पिता बच्चाहरु को हेरविचार मदत गर्न सुनिश्चित गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। एक प्रेम एक, कसरी संवाद र बच्चा खेल्न बताउँछ। आखिर, छोराछोरीलाई मात्र एक आमा आवश्यक छ। पिता पनि बच्चाहरु को जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
पतिको तपाईं वफादार रहेको, सेक्स जीवन विविधता गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मेरो मनपर्ने आफ्नो विचार र अन्य महिला यौन सम्बन्ध खोज्न छैन भनेर एक मानिस भेट्न छ।
पति तपाईं संग एक्लै हुन मन पराउँछ भने, उहाँलाई तपाईं राम्रो महसुस छैन भनेर हरेक दिन कुरा गर्न प्रयास गर्नुहोस्। ढिलो होस् वा चाँडो, यो व्यवहार मनपर्ने पट्टाइ लाग्ला छ। सेक्स - पारिवारिक सम्बन्ध मा महत्वपूर्ण घटक को एक।
एक महिला निरन्तर सराप र चिल्ला हुँदैन। यस्तो व्यवहार यो सजाउनु छैन। सुखद र शान्तिपूर्ण संचार - एउटा महत्त्वपूर्ण गुणस्तर। यो व्यवहार प्रिय आदर बताइएको छ।
शान्त कुराकानीले समझौता पुग्न मदत गर्नेछ जो कुनै पनि द्वन्द्व, बाहिर चिकना सक्छ। भद्र यसलाई आफ्नो पत्नी र छोराछोरीलाई आदर बताइएको छ। यो तपाईंको पारिवारिक भविष्य मा संचार हो।
पत्नी आफ्नै हात मा अग्रसर हुनुपर्छ त मानिसहरू, अधिक तातो स्वभावका छन्। , कुनै न कुनै किनारा बाहिर चिकना चुपचाप कुरा गर्न उनको पति सिकाउन प्रयास गर्नुहोस्। नसाहरू र पुकारा निकै स्वास्थ्य असर गर्छ। तपाईं यस्तो trifles आफ्नो बल खर्च गर्न सक्दैन। यो एक कठिन अवस्था बाहिर तरिका सँगै पाउन राम्रो छ।
विवाहमा सही पत्नी
को spouses छैन पारिवारिक जिम्मेवारी मात्र छ। वैवाहिक मा पत्नी को अधिकार पनि छ। आखिर, यो केवल आफ्नो मनपर्ने कुरा मा संलग्न घरपरिवारको चल्दैन पर्छ, तर पनि। तसर्थ, एक महिला चयन गर्ने अधिकार छ एक पेशा र पेशा। पति निषेध गर्नु हुँदैन पत्नी उहाँले रुचि के। हरेक महिला लामो समय घर रहन र परिवार मा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न को लागि सक्षम छ। केवल एक जोडीलाई घरेलू घरधन्दा काम संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
पत्नी को क्याफे तिनीहरूलाई बस्न वा चलचित्र जानको लागि, साथीहरूलाई भेट्न सहमत भएको छ भने यो निषेध छैन। सबैलाई गोपनीयता अधिकार छ। कहिलेकाहीं तपाईं घर देखि टाढा रहन र रमाइलो गर्न चाहन्छु।
पत्नी आफ्नो प्रिय ध्यान गर्ने अधिकार छ। यो सना भ्रमण वा आराम गर्न जान सक्नुहुन्छ। आखिर, कहिलेकाहीं यो घरेलू समस्या depresses। को विश्राम पछि, त्यो घर घरधन्दा लागि ऊर्जा को एक नयाँ वृद्धि महसुस हुनेछ।
हामी पति एक पत्नी को आधारभूत अधिकार र कर्तव्य समीक्षा। तर, महिलाहरु को भन्दा यस संग सहमत असम्भाव्य छन्। त्यसैले, धेरै परिवार मा spouses को जिम्मेवारी उत्तिकै विभाजित छन्। पत्नी खानाको तयारी गरिएको छ भने, पति भाँडा गर्छ। एक dusting, अर्को को spouses को - सफाई, आदि तर नबिर्स कि एक महिला - .. Homemakers। लोयल्टी, मित्रता,: को यो धेरै परिवार निर्भर , भरोसा सम्बन्ध सेक्स को लागि, र थप।
हामी परिवार मा के जिम्मेवारी पत्नी बाहिर फेला परेन। तर पत्नी त्यो सहयोगको आवश्यक, एक आदर्श आमा र पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री थियो। पति आफूलाई अग्रसर लिन र आराम गर्न आफ्नो मनपर्ने पठाउन सक्छन्। उनको एक्लै जाने गरौं। दैनिक घरेलू समस्या समय समयमा महिलाहरु oppresses। यसबाट कहिलेकाहीं निराशा आउँछ। यो प्रेम मदत गर्न त्यसैले आवश्यक छ।
मानिस चासो कायम गर्न, धेरै महिला समय समयमा आफ्नो छवि परिवर्तन। यस मामला मा, वहाँ एक कोमल, दयालु, मायालु, सिद्ध कदर र सुरक्षा गर्न चाहने पत्नीहरू छ।
Oksisayz श्वास Slimming अभ्यास
योनी microflora: एक धब्बा मा cocci
डेभीड ट्रेजगेट: जीवनी, तथ्याङ्क र खेलाडीको मूल्याङ्कन
अविश्वसनीय खतरा तपाईं पर्खिरहेको! यो कालो सर्प के सपना छ